MP4 aghọwo nnọọ mkpa video format na n'oge gara aga afọ ole na ole karịsịa n'ihi na nke eluigwe na ala ndakọrịta na mobile igwe. Ọ na-ekwe ndị ọrụ na-ekiri elu definition vidiyo na ha obere mobile ngwaọrụ mfe. E nwere ọtụtụ ihe onwunwe ugbu a ụbọchị si ebe ị nwere ike ibudata ọkacha mmasị gị video ke MP4 usoro. Ọbụna ma ọ bụrụ na ị ebudatara ọkacha mmasị gị video ọ bụla ọzọ video format, ị nwere ike mfe tọghata ya n'ime MP4 na iji video format converters. Ị nwere ike iji ihe nchọgharị gị na sọfụ ọkacha mmasị gị video na mgbe ahụ na ibudata ya.
Part1: Olee ebe ka Download MP4?
Part2: Online Downloader ka Download MP4
Part3: Download MP4 Free na Wondershare AllMyTube
Ọ bụ ezie na e nwere ọtụtụ nke ego si ebe ị nwere ike ibudata free MP4 ma ọ bụrụ na ị na-achọ ezi ihe ụfọdụ weebụsaịtị, mgbe ahụ, ebe a bụ top 30 weebụsaịtị si ebe ị pụrụ mfe ibudata MP4 for free:
1. Clip Ntụgharị
Weebụsaịtị njikọ: http://www.clipconverter.cc/.
Clip Ntụgharị bụ otu nke kasị mma weebụsaịtị maka nbudata MP4 videos for free. Ị nwere ike ọ bụghị naanị ibudata videos kamakwa tọghata ha ka ha kwesịrị ekwesị usoro.
Download gị MP4 video si website nanị site pasting video njikọ na ịpị download bọtịnụ.
Download video ọ bụla format site na-ahọpụta video format ụdị tupu nbudata video.
Clip Ntụgharị bụghị nanị awade owuwu nke nbudata videos kamakwa converting ha ka ha kwesịrị ekwesị usoro.
The website bụ kpam kpam free iji.
Weebụsaịtị njikọ: http://bollywoodmp4.net/.
Ọ bụrụ na ị bụ onye na Hindi music hụrụ n'anya, mgbe ahụ, Bollywood MP4 bụ ihe kasị mma na-aga n'ihi na ị! Ọ nwere ọtụtụ puku MP4 videos gụnyere ọhụrụ Trending tracks kwa.
Download akparaghị ókè ọtụtụ Bollywood music na MP4 usoro.
The video Nwela ebudatara na MP4 Ọkpụkpọ na ị na-adịghị na-eji ihe ọ bụla ọzọ Ntụgharị maka ya.
Weebụsaịtị njikọ: http://www.last.fm/music.
A ubé dị iche iche website site ọzọ video nbudata weebụsaịtị, Last.fm-achọ ya ọrụ ibudata "scrobbler" software maka nbudata na MP4 vidiyo si na ha website. Otú ọ dị ị ka nwere ike sọfụ ọkacha mmasị gị videos, ịkpado ha ma sonyere dị iche iche mkparịta ụka.
Ị pụrụ isonyere dị iche iche mkparịta ụka na website ịhụ ihe na-trending na-ekpo ọkụ.
Mgbe ị debanyere na a website, ị ga-nyere kwe nkwa na kwa ụbọchị dị ka ọdịnaya na ị na sọfụ.
4. Funmaz ka
Weebụsaịtị njikọ: http://www.funmaza.in/.
Funmaza bụ kacha ebe maka Hindi, Pakistani na Indi pop song ndị hụrụ. Ị nwere ike mfe download ọkacha mmasị gị MP4 video track enweghị akwụ ụgwọ otu penny.
I nwere ike ime karịrị nnọọ nbudata MP4 videos. Sọfụ bara uru software n'okpuru "mobile Mania" ngalaba.
Weebụsaịtị njikọ: http://endjatt.com/.
N'anya Punjabi music? Ọ bụrụ na ee, mgbe ahụ, Endjatt ga-a ezi obi ụtọ n'ihi na ị! The website nwere ọtụtụ video songs nke nwere ike ibudata na otu click.
Enyi na Enyi ọrụ interface na-enye ohere ọrụ ka mfe sọfụ site dịnụ videos.
Weebụsaịtị njikọ: https://playfun.mobi/latest-mp4-music-videos-hd-3.jsp.
Ọ bụrụ na ị hụrụ n'anya na-ekiri videos na ekwentị mkpanaaka gị, mgbe ahụ, WapNext bụ nke zuru okè na-aga n'ihi na ị! Ọ nwere ọnụ ọgụgụ nke videos nke e categorized dị ọcha edemede na-eme ka ọ dị mfe maka ọrụ ịchọ.
The mfe categorization eases ọrụ nke na-achọ ọkacha mmasị gị video.
The website bụ kpam kpam dakọtara na mobile otú i nwere ike sọfụ mgbe ọ bụla na n'ebe ọ bụla ị chọrọ.
Weebụsaịtị njikọ: https://itunes.apple.com/.
N'ihi na Apple hụrụ, ihe ọ bụla gbagwojuru ukara iTunes ụlọ ahịa. The iTunes ụlọ ahịa nwere ọtụtụ ọhụrụ videos na audios nke nwere ike ibudata ngwa ngwa. Ị nwere ike ịkwụ ụgwọ a obere ego mgbe nbudata ọhụrụ videos.
The iTunes ụlọ ahịa bụ ihe ukara Apple ụlọ ahịa nke na-eme ya pụrụ ịdabere na ọrụ enyi na enyi.
8. YouTube na MP4
Weebụsaịtị njikọ: http://youtubeinmp4.com/tos.php.
The videos dị na YouTube nwere ike ịbụ na dị iche iche video formats. Otú ọ dị ma ọ bụrụ na ị na-achọ naanị n'ihi na MP4 videos, mgbe ahụ,, YouTube na MP4 bụ nke zuru okè website maka gị. Ịnwere ike ịchọ ọkacha mmasị gị video na mgbe ahụ ibudata ya ngwa ngwa-enweghị ọtụtụ hassle.
The website enye vidiyo na MP4 format naanị.
YouTube na MP4 bụ kpam kpam dakọtara na ma na desktọọpụ na mobile. Ya mere ị pụrụ sọfụ n'ebe ọ bụla ị chọrọ!
The mfe ọrụ interface-enye ohere ọrụ ịchọ na ibudata ha mmasị videos.
Weebụsaịtị njikọ: http://keepvid.com/.
KeepVid bụ otu n'ime ndị kasị ewu ewu weebụsaịtị maka nbudata na converting videos n'ime ihe ọ bụla ndị ọzọ usoro. Ihe niile ị chọrọ ime bụ mado URL ọkacha mmasị gị video wee pịa na download bọtịnụ.
Download na tọghata video formats na otu ebe.
KeepVid Downloads video dum formats akwado site na website.
Weebụsaịtị njikọ: http://mymp4.in/.
MyMp4 bụ ezigbo website maka mobile ọrụ. The website dị maka desktọọpụ ọrụ kwa, kama ọ bụ iji na-mobile ọrụ. Niile videos dị na website na MP4 usoro.
The website na-cleanly categorized na keabiidii iji nke bụ ezigbo maka mobile ikiri.
The website bụ ebe obibi nke ọtụtụ elu definition videos nke nwere ike ibudata for free.
Weebụsaịtị njikọ: http://videoming.mobi/.
VideoMing bụ otu agadi website nke nwere ọtụtụ puku videos gụnyere ọhụrụ n'anya. Ihe niile ị chọrọ ime bụ, lee anya maka ọkacha mmasị gị video, ibudata ya na-amalite-eche nche!
Otu ike search engine maka videos na-eme ka ọrụ nke na-achọ ọkacha mmasị gị videos mfe.
The ọhụrụ mmelite na-egosipụta na n'ụlọ peeji onwe ya otú i nwere ike n'ụzọ dị mfe inwe a sinik ọnụ ọgụgụ kasị elu na ọhụrụ etinyekwu.
12. WAP TV usoro
Weebụsaịtị njikọ: http://waptvseries.net/index.xhtml.
Ọ bụrụ na ị hụrụ n'anya na tiivi nakwa na chọrọ ibudata ha na MP4 usoro maka ị na-elele ha mgbe e mesịrị, mgbe ahụ, WAP TV Series bụ nke zuru okè website maka gị!
The website e dere ihe na kasị mma collection nke telivishọn usoro, videos na fim mere ọ dịghị ihe na ị gaghị enwe ike ịhụ ya ebe a.
Niile videos na fim dị na website na MP4 Ọkpụkpọ na unu adịghị mkpa iji tọghata gị videos mgbe nbudata ha.
13. HDTV egosi
Weebụsaịtị njikọ: http://hdtvshows.in/.
HDTV shows.net obụrede mbụre nke a dịgasị iche iche nke Indian na English telivishọn usoro. Niile videos dị na website na MP4 format nke na-eme ya ọbụna mfe maka ọrụ.
The website e categorized n'ụzọ kwesịrị ekwesị nke mere na ndị ọrụ nwere ike sọfụ mfe.
The videos dị na website bụ elu definition videos na ndị dị na MP4 usoro.
Weebụsaịtị njikọ: https://storify.com/AnneAmaya1/free-download-mp4-videos-mp4-movies-tv-shows.
Ọ bụrụ na ị na-achọ a website si ebe ị nwere ike ibudata nta ọ bụla ụdị video na TV na-egosi, mgbe ahụ, Storify gị ga-abụ kacha ebe.
Ndị mmadụ na-achọ MP4 videos ga-enwe obi ụtọ ịmata na niile videos hụrụ na a website na MP4 format naanị.
Ọrụ nwere ike mfe anya maka ọhụrụ na kasị ewu ewu na vidiyo ka ha na-categorized iche iche.
Weebụsaịtị njikọ: http://skymovies.in/index.xhtml.
Ọ bụrụ na ị na-mgbe na-atụ anya ibudata ọhụrụ fim, mgbe ahụ, Sky Movies World bụ website na ị ga-eleta. The website bụ a n'ụlọ a ọtụtụ fim gụnyere ọhụrụ n'anya.
The website na-enye gị ohere ibudata ọhụrụ na fim na elu definition na MP4 usoro.
Weebụsaịtị njikọ: http://www.mp4point.com/.
MP4Point bụ a n'ụlọ a dịgasị iche iche nke na fim, videos, TV usoro na egwuregwu na ngwa ngwa maka download.
Ị nwere ike ibudata ihe ọ bụla na ihe niile site website free nke na-eri.
All downloads si website na MP4 format otú ị na-adịghị mkpa ụdị ọ bụla nke Ntụgharị iji tọghata ebudatara vidiyo na MP4 usoro.
Weebụsaịtị njikọ: http://movievilla.in/index.xhtml.
N'agbanyeghị ma ị na-achọ fim ma ọ bụ TV usoro, Movie Villa bụ ebe obibi nke ọtụtụ videos nke nwere ike ibudata ngwa ngwa maka free.
Hollywood fim, Bollywood fim na TV usoro dị na website.
All ebudatara videos na MP4 format otú ị na-adịghị mkpa iji tọghata ha ka ha mee ka ọ dakọtara na ngwaọrụ gị.
Weebụsaịtị njikọ: http://www.a1cinemas.com/.
A1 cinemas bụ a n'ụlọ Hollywood, Bollywood fim, egwuregwu, animated usoro na ọtụtụ ndị ọzọ videos.
Niile videos dị na website nwere ike mfe ebudatara na MP4 usoro.
19. ìgwè mmadụ TV usoro
Weebụsaịtị njikọ: http://mobtvseries.net/index.xhtml.
Dị ka aha-atụ aro, ìgwè mmadụ TV usoro bụ a n'ụlọ a ọnụ ọgụgụ nke telivishọn usoro ezigbo maka ma mobile ọrụ na web ọrụ.
A otu nkwụsị ebe maka ndị na-achọ TV usoro.
All ebudatara videos na MP4 otú ị na-adịghị mkpa ọ bụla ọzọ Ntụgharị.
20. iMP4 fim
Weebụsaịtị njikọ: http://ww43.imp4movies.com/.
iMP4 fim bụ a n'ụlọ fim nakwa dị ka telivishọn usoro, na-enye ya ọrụ na otu n'usoro nke edemede ịhọrọ site na.
The videos ebudatara site na saịtị a na-dakọtara na mkpanaka gị na ngwaọrụ na ị nwere ike ibudata ha ozugbo na MP4 usoro.
Weebụsaịtị njikọ: http://fzmovies.co/.
Ọ bụrụ na ị na-achọ Hollywood na Bollywood nkiri na MP4 format, mgbe ahụ, FZ Movies bụ nke zuru okè website maka gị!
Niile na fim dị na website nwere ike ibudata na MP4 usoro.
Weebụsaịtị njikọ: http://mp4times.com/.
N'agbanyeghị ma ị na-achọ Bollywood fim, English fim, dubbed fim, animated fim, Marathi fim ma ọ bụ TV na-egosi, MP4 Times nwere niile nke ha na ya na ụlọ ahịa.
Ị nwere ike ibudata videos dị na a na website MP4 format ngwa ngwa na-enweghị mkpa nke ọ bụla mpụga converters.
Weebụsaịtị njikọ: http://mp4mobilemovies.net/.
Dị ka aha na-atụ aro, MP4 Mobile nkiri bụ nke zuru okè website gị ma ọ bụrụ na ị na-achọ ihe nkiri na MP4 usoro.
Ị nwere ike ibudata ọhụrụ fim na videos ebe a ozugbo na MP4 usoro.
Weebụsaịtị njikọ: http://www.new3gpmovies.com/.
Dị ka ọtụtụ ndị na fim download weebụsaịtị, 3GP Mobile Movies bụ ihe ọzọ website na awade ya ahịa ndị ọhụrụ na fim, videos-egosi na TV na MP4 usoro maka free.
Ị nwere ike ibudata nkiri na GP na MP4 usoro maka mkpanaka gị na ngwaọrụ.
Weebụsaịtị njikọ: http://freeimp4movies.yolasite.com/.
The website obụrede mbụre nke a ọnụ ọgụgụ nke ọhụrụ na fim nke nwere ike ibudata n'ihi na gị Android na iPhone.
Mgbaru ọsọ bụ isi nke website bụ ihe ike na Android na IPhone ọrụ. Ya mere, ndị na fim ebudatara site ebe a na-agba ngwa ngwa na mobile ngwaọrụ.
Weebụsaịtị njikọ: http://crazymovies.org/.
Ọ bụrụ na ị na-achọ ihe ndị kasị ụzọ ibudata ọhụrụ na fim na mkpanaka gị na ekwentị mkpanaaka, mgbe ahụ, CrazyMovies nwere ike ịbụ gị otu nkwụsị ebe.
The mfe keabiidii categorization nke website na-enyere ndị ọrụ na-achọ ha mmasị fim ngwa ngwa.
Na nanị otu click, ị nwere ike ibudata ọkacha mmasị gị na fim ngwaọrụ gị n'achọghị banyere ihe ọ bụla ndakọrịta mbipụta.
Weebụsaịtị njikọ: http://mysupermovies.com/.
Na MySuperMovies website, ị bụ naanị a click lawa nbudata ọhụrụ na ọkacha mmasị gị na fim.
N'ihi na ndị mmadụ, ndị na-adịghị n'aka na nke nkiri na-ekiri ha, ha nwere ike mfe họrọ ha mmasị udi nke nkiri dị ka ntochi na mgbe ahụ sọfụ nile ntochi fim.
The interface bụ nnọọ enyi na enyi na ị nwere ike ibudata nkiri kacha amasị gị na dị nnọọ a button click.
Weebụsaịtị njikọ: http://www.moviecrib.com/movies/.
MovieCrib bụ oké saịtị maka nbudata na ọhụrụ na fim yana onye integrated search engine ịchọta nkiri kacha amasị gị enweghị ihe ọ bụla hassles.
Dị pịa na nkiri na ị chọrọ ibudata na-enwe na ya na ndị enyi gị.
Weebụsaịtị njikọ: http://www.mp4arena.in/.
Otu n'ime ndị kasị na kasị mma isi mmalite maka nbudata free MP4 fim, MP4Arena bụ ebe obibi nke ọtụtụ English na Hindi fim dị mfe.
The fim ebudatara site ebe a nwere ike mfe egwuri na ọ bụla ngwaọrụ mkpanaaka.
30. Mobile Movie Mpaghara
Weebụsaịtị njikọ: http://www.moviesmobile.net/bollywood-mobile-movies/index.php.
Ọ bụrụ na ị na-achọ ezi website ibudata fim ozugbo na ekwentị gị, mgbe ahụ Mobile Movie Mpaghara bụ ezi mmasi maka gị.
Otu integrated search mmanya na-eme ka ọ dịkwuo mfe anya n'ihi na nkiri kacha amasị gị ngwa ngwa.
The fim na TV usoro ebudatara site na nke a website-agba ngwa ngwa na mobile ngwaọrụ.
Ọ bụrụ na ị na-achọ MP4 Downloader nke pụrụ inyere gị na nbudata MP4 ngwa ngwa, mgbe ahụ, a bụ ndepụta nke kasị mma 5 MP4 Downloader na ike ịbịa ka gị na nnapụta:
The MP4 YouTube Video Downloader dị maka Windows n'elu ikpo okwu naanị.
The mfe interface-enye gị ohere ngwa ngwa Tapawa gị video URL wee ibudata na video na dị nnọọ a click.
MP4 YouTube Video Downloader anaghị akwado na atụmatụ nke ogbe nbudata.
The software bụ dị na free ikpe mode.
Free MP4 Downloader enye gị ohere download vidiyo si na ọtụtụ weebụsaịtị gụnyere YouTube, Dailymotion wdg
The software akwado a ọnụ ọgụgụ nke faịlụ formats na i nwere ike ịzọpụta ebudatara faịlụ na MP4 nakwa FLV faịlụ Ọkpụkpọ.
Ị pụrụ ọbụna ọkụ gị CD na DVD na iji software.
The Houlo Video Downloader dị maka Windows n'elu ikpo okwu naanị.
Ị nwere ike iji nke a video Downloader maka nbudata elu definition videos enweghị ihe ọ bụla hassles.
The software onwe ya na-ewe nnọọ obere faịlụ size ya ka ị ghara-enwe nchegbu banyere ebe nchekwa mbipụta.
4. Freemake YouTube MP3 Ntụgharị
Otu nke kasị ukwuu uru nke na-eji Freemake YouTube MP3 Ntụgharị bụ na ọ na-akwado ma MP4 na MP3 usoro.
Ezie na ndị ọzọ video Downloader abịa ke nnukwu size nchịkọta nke 34-35 MB, Freemake YouTube MP3 Ntụgharị abịa na a obere size nke 1.2 MB naanị.
The software dị na free ikpe Pack na ị ga-akwụ naanị otu ugboro ị na-azụ na ugwo version.
The software na-amị formats na-dakọtara na kasị nke ngwaọrụ.
The software bụ mfe dakọtara na Windows n'elu ikpo okwu na dị na free ikpe ngwugwu.
The ọrụ enyi na enyi interface na-achọ ndị ọrụ na-nanị ịrụ ole na ole clicks iji budata na tọghata ha mmasị videos.
Ị nwere ike ibudata vidiyo si na a dịgasị iche iche nke dị iche iche weebụsaịtị-eji nke a kacha video nbudata software.
[Edozi] iMovie Ga-Mbubata MP4 Files
> Resource> MP4> MP4 Download: ebe na otú ka Download?